Izindaba - I-COVID 19 RECOVERY OF HOT MELT ADHESIVE (HMA) MARKET 2020 TRENDING TECHNOLOGIES, DEVELOPMENTS, ABADLALI ABANGUNDOQO KANYE NEZIBONELELO KU-2025
ISIQINISEKISO SE-COVID 19 SOKUPHILA KWE-HOT MELT ADHESIVE (HMA) MARKET 2020 TRENDING TECHNOLOGIES, DEVELOPMENTS, ABADLALI ABANGUKHIWO NESIBIKELELO KU-2025
Umbiko Wokucwaninga Emakethe we-Global Hot Melt Adhesive (HMA) 2020: Ukuhlaziywa Komphumela We-COVID-19
'Imakethe ye-Hot Melt Adhesive (HMA)'Ucwaningo olwenziwe yiBrand Essence Market Research lucacisa imakethe efanelekile nokuqonda kokuncintisana kanye nolwazi lwesifunda nolwabathengi. Kafushane nje, ucwaningo lucubungula zonke izici ezibalulekile zale mkhakha webhizinisi onomthelela kumathrendi akhona, isikhundla senzuzo, isabelo semakethe, usayizi wemakethe, ukulinganiswa kwesifunda, kanye nezinhlelo zokunwetshwa kwebhizinisi zabadlali abakhulu emakethe ye-Hot Melt Adhesive (HMA).
Umbiko wokucwaninga ngeHot Melt Adhesive Market uqukethe ukuhlaziywa okuningiliziwe ngezindlela zakamuva zemakethe. Umbiko ubuye uhlanganise nezifinyezo eziningiliziwe mayelana nezibalo, ukubikezelwa kwemali engenayo kanye nokulinganiswa kwezimakethe, okubuye kuveze isimo salo esimweni sokuncintisana sendawo kanye namathrendi okukhula amukelwa abadlali bemikhakha emikhulu.
I-Hot melt adhesive (HMA), eyaziwa nangokuthi i-glue eshisayo, iyindlela yokunamathisela i-thermoplastic evame ukuthengiswa njengezinti eziqinile ze-cylindrical zamadayimitha ahlukahlukene enzelwe ukuthi kusetshenziswe kusetshenziswa isibhamu seglue esishisayo. Isibhamu sisebenzisa into yokushisa esebenza ngokuqhubekayo ukuncibilikisa i-plastic glue, umsebenzisi asigqobhoza ngesibhamu noma ngomshini we-mechanical trigger esibhamu, noma ngokucindezela okuqondile komunwe. I-glue ekhishwe emlenzeni oshisayo ekuqaleni ishisa ngokwanele ukuthi ingasha futhi isikhumba samabhamuza. Ingcina inamathele lapho ishisa, futhi iyaqina kumasekhondi ambalwa kuya kumzuzu owodwa. Okuncibilikisayo okushisayo kungasetshenziswa ngokufaka noma ngokufafaza.
Ekusetshenzisweni kwezimboni, ama-adhesives ashisayo ancibilika ahlinzeka ngezinzuzo ezimbalwa ngaphezulu kokunamathisela okususelwa kumakhemikhali ancibilikisa. Amakhemikhali e-organic aguquguqukayo ancishisiwe noma aqedwe, futhi isinyathelo sokomisa noma sokuphulukisa siyasuswa. Okuncibilikisayo okushisayo kunempilo eshalofini ende futhi imvamisa kungalahlwa ngaphandle kwezinyathelo ezithile zokuzivikela. Okunye ukungalungi kufaka umthwalo oshisayo we-substrate, ukunciphisa ukusetshenziswa kwama-substrates angazweli emazingeni okushisa aphezulu, nokulahleka kwamandla ebhondi emazingeni aphezulu okushisa, kuze kuphele ukuncibilika kokunamathiselwe. Lokhu kungancishiswa ngokusebenzisa isinamathelisi esisebenza ngemuva kokuthi ukuqina kuqhubeka nokwelashwa isib, ngomswakama (isb., Ama-urethanes asebenzayo nama-silicone), noma kwelashwa ngemisebe ye-ultraviolet. Amanye ama-HMA angahle angazweli ekuhlaselweni ngamakhemikhali nasesimo sezulu. Ama-HMA awalahli ukushuba ngesikhathi sokuqina; izinto zokunamathisela ezincibilikisayo zingalahlekelwa kufika ku-50-70% wobukhulu besendlalelo ngesikhathi somiswa.
Ngo-2019, usayizi wemakethe we-Hot Melt Adhesive (HMA) ungama-7500 wezigidi zase-US $ futhi uzofinyelela ku-11700 wezigidi zase-US ngo-2025, ukhule ku-CAGR ka-6.6% kusuka ku-2019;
Okokuqala, isidingo esandayo sokunamathela okushisayo sishayela usayizi wemakethe. Okwesibili, Imakethe igqugquzelwa yimfuno ekhulayo evela ezinkampanini ezigcina ukusetshenziswa njengalebula, ukupakisha, ukwakha nokwakha, ukusebenza ngokhuni, ukubopha izincwadi, izimoto, izimakethe ezingalukanga, ezokuthutha nezicathulo. Ngaphezu kwalokho, ukuthambekela okujwayelekile kokusuka ezintweni ezinamathelisi ngenxa yemiphumela elimazayo yezinhlanganisela ezingazinzile ezinikezwe ngalezi zinamathelisi noma izinto ezinamathelayo kulindeleke ukuthi kukhuthaze ukukhula kwemakethe esikhathini sesibikezelo. Ingcindezi eqhubekayo enikezwa yiziphathimandla ezilawulayo ezisebenza njenge-EPA (i-Environmental Protection Agency) ne-REACH kulindeleke ukuthi inciphise ukusetshenziswa kwezinamathelisi ezincike kuphela emzameni wokunciphisa imiphumela engemihle emvelweni, ngaleyo ndlela kuthinte imakethe yokunamathisela eshisayo. Ngaphezu kwalokho, isibopho esiqinile ngaphandle kwesidingo sokuphulukisa i-glue ngemuva kokuthi isetshenzisiwe kuyinzuzo eyengeziwe yezinqubo zokufufusa nezishibhile zokusetshenziswa kokuphela. Okwesithathu, iNyakatho Melika inemakethe ebaluleke kakhulu yezinamathelisi ezishisayo ezincibilikayo futhi kulindeleke ukuthi ibe nengxenye eyodwa kwezintathu zokufunwa komhlaba kulezi zifunda. IYurophu nayo kulindeleke ukuthi ibe nokukhula okuphawulekayo emakethe yokunamathisela eshisayo esikhathini sokubikezela. IMelika Ephakathi neningizimu nayo kulindeleke ukuthi ikhule ngokushesha.
Kulo mbiko, u-2018 ubhekwe njengonyaka oyisisekelo kanye no-2019 kuya ku-2025 njengesikhathi sokubikezela sokulinganisa usayizi wemakethe we-Hot Melt Adhesive (HMA).
Lo mbiko ucwaninga ngosayizi wezimakethe zomhlaba wonke we-Hot Melt Adhesive (HMA), ikakhulukazi egxile ezifundeni ezibalulekile njenge-United States, i-European Union, i-China, nezinye izifunda (iJapan, Korea, India kanye ne-Southeast Asia).
Lolu cwaningo luveza ukukhiqizwa kwe-Hot Melt Adhesive (HMA), imali engenayo, amasheya emakethe kanye nezinga lokukhula kwenkampani ngayinye eyinhloko, futhi kuhlanganisa nemininingwane yokuwohloka (ukukhiqizwa, ukusetshenziswa, imali engenayo kanye nesabelo semakethe) ngezifunda, uhlobo nezinhlelo zokusebenza. idatha yokwehlukaniswa komlando kusuka ku-2014 kuye ku-2019, nokubikezelwa kuya ku-2025.
Ezinkampanini eziphezulu e-United States, e-European Union nase China, lo mbiko uphenya futhi uhlaziye ukukhiqizwa, inani, intengo, isheya lezimakethe nezinga lokukhula kwabakhiqizi abaphezulu, idatha esemqoka kusukela ngonyaka ka-2014 kuya ku-2019.
Isikhathi Iposi: Aug-03-2020